Apple inoti Siri inoshandiswa zuva nezuva pane anopfuura mamirioni mazana mashanu emidziyo | IPhone nhau
Kunyange chiri chokwadi kuti Apple yaive imwe yemakambani ekutanga kuita mubatsiri anozivikanwa mukurumbira, pamusoro pemakore, zvinoita sekunge Apple sarudza padivi chikuva kutarisa kune zvimwe zvinhu, uye kubva ipapo Siri kukura kwave kuoma mutezo, kana kuti zvirinani kuderedzwa.
Imwe neimwe nyowani vhezheni yeIOS inopihwa neApple, inosimbisa kuti Siri ave akangwara, anoshanda zvakanyanya, anobatsira zvakanyanya ... Siri ari anenge mubatsiri mumwechete akauya kubva paruoko rwema iPhone 4s anenge makore manomwe apfuura.
Sekureva kwaApple, parizvino Siri inoshandiswa nevashandisi vanopfuura mamirioni mazana mashanu, nhamba dzinopesana nekufambira mberi kwakave naSiri mumakore apfuura. Siri parizvino inowanikwa pane iyo iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, macOS, uye Apple TV. Apple haibvumire vechitatu-bato vanogadzira kushandisa Siri, sarudzo yakadzivirira Apple chaiyo mubatsiri kubva mukugona kukura nekuvandudza mashandiro ayo nekukurumidza mumakore apfuura.
Kusvikira nhasi, hapana chaiye mubatsiri anowanikwa pamusika, angave ari Alexa, Google Assistant, Cortana kana Siri, akangwara zvakakwana kuti akwanise kuenderera pakukurukurirana munguva chaiyo nemushandisi, basa richazotora nguva yakareba kuti risvike uye rinoda nguva yakawanda yekudzidza pamwe nekubatana padivi revashandisi.
Nekuvhurwa kwePambaPod, kushandiswa kwaSiri kuchawedzera, zvinoenderana nenhamba yekutengesa, semubatsiri chaiye ndiyo nzira huru yekutaurirana neApple yekutanga smart speaker, mudziyo watinogona zvakare kuyanana nawo, kunyangwe nenzira shoma, nemabatirwo ekubata ari pamusoro pechinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoti Siri inoshandiswa zuva nezuva pane anopfuura mamirioni mazana mashanu emidziyo
Siri ini ndinofunga iwe unofanirwa kuisa mabhatiri sezvavanotaura, nekuti iine zvikanganiso zvakawanda, uye kwete chete kuchinja izwi, vabatsiri vatsva vanobuda uye Siri anoramba akafanana.